(FAALLO):- Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaranka ma ku guuleysan doonaan inay asaas fiican u dhigaan qabsoomidda Doorashooyinka soo socda ? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(FAALLO):- Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaranka ma ku guuleysan doonaan inay asaas fiican u dhigaan qabsoomidda Doorashooyinka soo socda ?
Madaxda Qaranka iyo kuwa Dowlad-gobaleedyadda waxaa maanta Xarunta Madaxtooyadda ee magaalladda Muqdisho uga furmay Wareeg ka mid ah Kulamadda Golaha Wada-tashiga Qaranka oo looga arrinnsanayo Aayaha Qaranka.
Madaxda ka qeyb galayso Kulankaasi waxay sheedda sare uga muuqdaan kuwo u hamuun qaba in uu Kulankooda ka soo baxo Natiijooyin u wanaagsan Dadka iyo Dalka Hooyo, balse, waxa uu Hoggaamiye kasta doonayaa inuu ka hadlo Aragtidiisa Siyaasadda iyo Nidaamka Doorashadda iyo Awood-qeybsiga Maamulka Qaranka.
Waa hubaal inuu Hoggaamiye kasta qalbadda ku hayo Qoddobo u qarsoon, oo ku aadan Aragtidiisa, Hankiisa Siyaasadda iyo Kaalintiisa ku aadan Doorashadda Qaranka ee dhici doonto bisha September ee sannadkan.
Madaxda Qaranka waxay hanka ku hayaan ugu yaraan in mar kale Xilalka ay haatan hayaan loo soo dooran doono, si aysan uga hoobanin Masraxa Siyaasadda iyo Loolanka Doorashadda Madaxtinimadda.
Madaxda Dowlad-gobaleedyadda waxa dhamaantooda ka siman yihiin Hamiga Siyaasadeed ee gaarsiisan Heerka Qaran, gaar ahaan Madaxweynayaasha Dowlad-gobaleedyadda ee horey Xilal Qaran uga soo qabtay Dowladihii KMG iyo Dowladda Federalka.
Waxaa la tilmaamaa inay Hamigaasi si gaar ah ugu jiro Madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali “Gaas” oo Xilka Ra’isul-wasaare Qaran ka soo qabtay Dowladdii KMG ee Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweynaha Galmudug, C/kariim Xuseen Guuleed oo isagana Wasiirkii Amniga Qaranka ka soo noqday Dowladda Federalka ee haatan talada hayso ee uu Madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud.
Inkastoo Shirka Wada-tashiga ee maanta looga hadli doono Ajendooyin Farsamo oo ku aadan Nidaamka Doorashadda, qaabka loo xulanayo Guddiyadda Khaaska ee loo xil-saarayo Tabaagelinta Doorashooyinka, Xulashadda Xildhibaanadda iyo Madasha lagu dooranayo Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Barlamaanka soo socda.
Hoggaamiye kasta waxa uu doonayaa inuu Shirka Wada-tashiga ku biiriyo Aragtidiisa uu u arko inay noqon karaan Buundo Siyaasadeed uu uga tallaabi karo Doorashooyinka Qaranka ee soo socota.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inuu Calaw-siyaasadeed badan ka dhex jiro Qoddobadda ay Golaha Wada-tashiga Qaranka ka arrinsadaan, waayo weli lama qeexin inuu Madaxweyne Gobaleed isku soo taagi karo Doorashooyinka Qaranka iyo Inuu Labada Xi lee Qaranka iyo Gobalka isku sii hayn karo.
Hoggaamiyayaasha Madasha Wada-tashiga Qaranka ayaa waxaa la gudboon inay ka baaraan-degaan Qoddobadda Xasaasiga iyo in la sameeyo Marjac laga tixraaci karo ama lagu Lifaaqi karo Qoddob-doodeedka soo if baxa , si aan Isbaaro-siyaasadeed lagu hor gudbin marka la gaaro Xilliga Doorashooyinka.
Hoggaamiyayaasha ka qeyb galayo Shirka Wada-tashiga Qaranka waxaa la gudboon inay Danaha Khaaska ka horumariyaan Danaha Qaranka, la iskana ilaaliyo Isbaaro-siyaasadeedka, Sed-bursiga Kooxeedkaama Beeleedka iyo inay Shaqsiyaad kooban khatar geliyaan Masiirka Dowladnimo iyo Mustaqbalka Dadka iyo Dalka Somalia.
Sidoo kale, tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay Dowladda Federalka soo bandhigtay Nidaamka Doorashooyinka, waxaa majaraha lala galay Aamusnaan Siyaasadeed, waxaana shiiqay Xusul-duubkii Madaxda Dowlad-gobaleedyadda ee carcarka u qabay Wada-tashigii ku aadanaa Nidaamka Doorashadda, Dhismaha Dowladda soo socota iyo Ajendaha Siyaasadeed ee sannadaha 2016-ka ilaa 2020-ka.
Waa hubaal in Go’aanka Dowladda Federalka ku saxsanayd inay ku dhawaaqdo Go’aanka Nidaamka Doorashadda, kadib, markii lagu wada guul-daraystay Wada-xaajoodkii Dowladda iyo Maamul-gobaleedyadda, isla markaana quus laga istaagay in Talo mideysan laga gaaro Nidaamka Doorashadda.
Shaxda ay Dowladda Federalka soo agaasintay oo ay Beesha Caalamka ayideen waxa uu meesha ka tuuray Aragti Kala-duwanaanshihii Madaxda Qaranka iyo kuwa Goballadda, waxaana iminka la shaaciyey Tubta Hiigsiga Nidaamka Doorashadda iyo Dhismaha Labada Aqal ee Barlamaanka.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inkastoo ay Dowladda Federalka dejisay Jadwalka Shaqo ee Nidaamka Doorashadda, haddana waxa dib-u-eegis u baahan Nidaamka Tirooyinka Kuraasta Barlamaanka loo qoondeeyey, waxaana jirta inaan Saami-qeybsiga lagu soo darin Gobalka Banaadir iyo Dowlad-gobaleedka Khaatumo oo sedkooda ay kala jiiteen Somaliland iyo Puntland.
Sidoo kale, Dowladda Federalka ayaa u baahan inay dhamaystirto dhamaan Arrimaha Lafdhabarka u ah Qabsoomidda Doorashooyinka ee bisha September ee soo socota.
Dowladda Federalka waxaa kaloo laga filayaa in la dardar geliyo Dhamaystirka Axdi-qarameedka, Dhismaha Maxkamadda Dastuurka iyo Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka, taasi oo haddii aan iminka loo gogol-xaarin keeni karta in lagu soo baraarugo Xilli ay Xeero iyo Fandhaal kala dhaceen.
Waxaa Qoray: Hassan Ali Osman “Hassan Istiila”
Alshabaab oo gaari iyo Hoobiye ka soo dhacay Saldhig Bolis oo ku yaalla Wajeer.